काठमाडौँको तीनकुनेमा घट्यो अचम्मको घटना, लियो उ’ग्ररु’प ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २६ पुष २०७६, शनिबार १९:०६
नारायण ढुङ्गाना – गत मङ्सिर २१ गते साँझ काठमाडौँको तीनकुनेमा एक बालकलाई कुकुरले टो क्यो । रे’विज छ छैन भन्ने पत्ता लगाउन कुकुरको निगरानी गर्नुपर्ने चिकित्सकले सुझाव दिने गरेका छन् । त्यसतर्फ ख्यालै नगरी केही मानिस मिलेर कुकुरलाई र’ड र लाठीले हा’नेर तत्कालै मा’रे । उक्त घटना नजिकैको एक महिलाले थाहा पाइन्, जसले बेलाबेलामा त्यही कुकुृरलाई खानेकुरा दिने गर्थिन् । जनावर अधिकारकर्मी हुँदै मुद्दा प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म त पुग्यो तर दर्ता गर्न अस्वीकार गरियो ।
केही महिनाअघि नेपालगञ्जबाट दैलेखका लागि लगिएका तीन दर्जन गाईगोरु सुर्खेतको एक जङ्गलमा म’रेको अवस्थामा भेटियो भने कैयौँ घाइते भएको कारुणिक दृष्यले मुलुककै ध्यान तानेको थियो । खोटाङको दिक्तेल र लमजुङमा पनि कुकुर मा रेको यस्तै घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यही मुद्दा दर्ता भएर कानूनी प्रक्रिया चलिरहेका बेला काठमाडौँमा त्यस्तै एउटा निर्दयी समाजबाट घटाइएको घटनामा भने बानेश्वर प्रहरीले चासो नदिएको पशु अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले मुद्दाको प्राथमिकता मान्छेमा बढी हुने भए पनि त्यसरी जनावरलाई पनि मा र्न पाइँदैन, कानून लाग्छ कसैले रितपूर्वकको जाहेरी ल्याउँछ भने दर्ता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकी संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद २७ मा पशुपक्षीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा २९० मा कसैले कुनै पशुपक्षीलाई कु टी, हि र्काइ वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइ वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाइ वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकालाई काममा लगाई वा हानिकारक वस्तु से’वन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले या तना दिन वा आपूmले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएका कारणले सार्वजनिकरुपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ ।
उक्त कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कानूनमा स्पष्ट व्याख्या हुँदा पनि मुद्दा दर्ता नगरिनुमा केही गडबडी छ, पशुअधिकारकर्मी विकेश श्रेष्ठले भन्नुभयो । आफ्नै छोरालाई टोकेकै कारणले सेतु (कुकुर) कु’टीकु’टी मा’रिएको घटनामा दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जिव ओलीको नाम जोडियो ।
उहाँका अनुसार बिरामी माइला छोराका उपचारका लागि तीनकुनेस्थित एक अस्पतालमा ओली परिवार आएको थियो । अनायासै कान्छो छोरालाई सेतु नामको कुकुरले टो क्यो । “एकैछिनमा मान्छे जम्मा भए, विगतमा आफूलाई पनि यही कुकुरले टो केको भन्दै हि र्काउन थाले,” आज काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले घटनाबारे भन्नुभयो । कुकुर मा र्ने योजनाबद्ध कुनै इन्टेन्सन नभएको दाबी गर्दै ओलीले छोरालाई टो केको आबेगमा गाडीको टायर खोल्ने र ड लिएर छतसम्म आफू पनि पुगेको बताउनुभयो । घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै ओलीले कुकुर बचाउन प्रयास नगरेकामा भने पश्चाताप गर्नुभयो ।
कुकुर मा रेर अरु मान्छे हिँडेपछि जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले अर्काको घरमा त्यसै छाड्न भएन भनेर म रेको कुकुर बोकेर तल ल्याएको स्वीकार्दै उहाँले महानगरको गाडी नआएमा आफुलाई खबर गर्न भनेर नाम र नम्बरसमेत छाडेको जानकारी दिनुभयो ।
“घटना नहुनुपर्ने थियो, मैले जोगाउन सकिन, म यसमा पश्चाताप गर्छु, यस्तो घटना हुनुहुँदैन, घटना भएकामा दुःखी छु, क्षमाप्रार्थी पनि छु”, ओलीले थप्नुभयो । घटनासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालबाट आफूलाई अ’पश’ब्दसहितको गा’लीग’लौ’ज भएकामा पीडा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जनावर संरक्षणमा सक्रिय अभियानकर्मी बीना पन्तले भन्नुभयो, “मान्छेसँगै जनावरले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, यसरी मा’रिनुहुन्न, कसैले पनि यस्तो घटना नघटाओस्, हामीलाई खबर गर्नुस्, हामी उद्धार गर्छाैँ ।” कानून कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिले यस्तो गरेको झन् सह्य नहुने उहाँको तर्क छ ।
सडकका छाडा कुकुरको संरक्षण गर्दै आएको संस्था रेस्क्यू एनिमल नेपालका अध्यक्ष सिर्जना ठकुरी सेतु (कुकुर) ले कुनै पनि हालतमा न्याय पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । यसरी अरुले जनावरलाई नमा’रोस् भन्नका लागि पनि नजिर बसाल्नुपर्नेमा अभियानकर्मीको जोड छ । पशुपक्षीप्रति नि’र्दयता रोकावट समाजका अध्यक्ष विकेश श्रेष्ठले जनावरको संरक्षण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि आफैँ यस्ता घटनामा लाग्नु दुःखद् हो भन्नुभयो । यस्ता घटना देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको र संस्थाको पहलमा मुद्दा चलाएको नजिर पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार तीन महिनाअघि यस्तै घटना खोटाङको दिक्तेलमा भएको थियो । लम्जुङमा पनि घटेको थियो । नेपालगञ्जबाट लगेको गाई सुर्खेतमा म रेको घटना अझै सेलाएको छैन । “स्पष्ट प्रमाण भएकाको हकमा मुद्दा अगाडि बढाएका छौँ, कतिपय प्रमाण नहुँदा हामी मुकदर्शक छौँ, यसरी जनावरलाई मा र्ने र या तना दिने कुरा सहन गर्न सकिँदैन”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । मुद्दा लिएर जाँदा प्रहरी र सरकारी वकिलले नै मुद्दा दर्ता गर्न नमान्नुमा भने आफूलाई दुःख लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले १० भन्दाबढी सङ्घसंस्थाले काठमाडौँमा घाइते भएका छाडा कुकुर, गाई, बिरालोलगायत जनावरको उद्धार गरेर संरक्षण गर्दै आएको छ । उनीहरु नै मुद्दा लिएर अहिले सरकारी वकिल र प्रहरीमा धाइरहेका छन् । कतिपय कुकुर र गाई सडकमा गाडीले कि चेर अ पाङ्ग भएका छन् । कतिपय ता’तोपा’नी ख न्याएर डढाइएको अबस्थाका छन् । कतिपय वि’क्षिप्त अवस्थामा उद्धार गरिरहेको अभियानकर्मी बताउँछन् ।
पशु अधिकारकर्मी बीना पन्त लामो सङ्घर्षपछि मानिसलाई त बल्ल उद्धार गर्न थालिएको स्मरण गर्दै समाजमा पशुलाई पनि उचित संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने चेत फैलाउन जरुरी छ भन्नुभयो । नेपाल शाकाहारी सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण गुरुङले जनावरलाई पनि संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने चेतना यो घटनाले दिएको बताउनुभयो ।
३ श्रीमानको एउटा श्रीमती ! क्वारेन्टाइनमा छु भन्दै अर्कोसंग बिवाह , माईलो श्रीमान मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । अहिले सामाजिक संजालमा विभिन्न भिडियो भाईरल भए संगै फेरि यस्तो अनौंठो घ’टना घटेको